Suuriya oo wareejineyso hubka sunta ah - BBC News Somali
Suuriya oo wareejineyso hubka sunta ah
27 Abriil 2014
Image caption Xrun ka mid ah meelaha lagu hayo sunta kiimikada ee Suuriya
Dowladda Suuriya ayaa illaa iyo maanta ugu dambeyn ay tahay inay wareejiso dhammaan baqaarada lagu xareeyo hubkeeda kiimikada ah, waa haddii ay dooneyso in xilliga kamadambeysta ee Dimishiq ay u qabatay hay’adda mamnuucidda hubka kiimikada aduunka ay ku wareejiso.
Arrintan ayaa imaaneyso iyadoo dowladda Mareykanka ay sheegtay inay ka walaacsan tahay in ciidamada dowladda ay gaaska koloriinta u adeegsadeen sida hub oo kale.
Hay’adda OPCW ayaa sheegtay in xilliga looga saarayo kiimikada dalka Suuriya inuu muhiim yahay.
Qiyaastii ugu dambeysay ee ay soo bandhigtay hay’adda ayaa muujineysay in boqolkiiba 86 sunta hubka laga sameeyo laga saaray dalka Suuriya.
Sii socoshaha weerarada sunta
Xittaa haddii dowladda Suuriya ay ku wareejiso xilliga kamadambeysta ka hor, howlgalkan taariiqiga ah waxaa dhaawacayo weerarada loo adeegsanayo gaaska koloriinta.
Koloriin waxaa sameeyo warshado aad u badan oo isticmaala, mana ka mid ahan hubka mamnuuca ah sida ay shaaca ka qaadeen kooxaha u ololeeyo mucaaradka, balse in koloriinta loo adeegsado sida hub oo kale, waxay jebineysaa sharciga caalamiga ah ee hubka kiimikada ah.
Heshiiska uu madaxweyne Asad ku ballan qaaday inuu wareejiyo 1,300 oo xarun oo lagu keydiyo suntan kiimikada ayaa si cad waxaa loo arkaa inuu isaga difaacaayay tallaabo meleteri oo uu kala kulmo Mareykanka.
Haddii koloriinta ay noqoto hub, micnaha waxa uu noqonayaa suntan kiimikada way sii soconeysaa, xittaa haddii howoolgalka uu ku guuleysto in dalka oo dhan laga sifeeyo awoodda kiimikada.
Dowladda Bishar Al-Asad ayaa diidan in dalka ay geysay banbooyin ka sameysan koloriin.